QULQULKA AQALKA DHIRTA LOO YAQAAN "GREENHOUSE ARCS": QALABKA IYO WAX SOO SAARKA - GREENHOUSE
Suuqa waxaa lagu buuxiyaa naqshado kala duwan. Si kastaba ha ahaatee, miyay qiimo weyn u tahay alaabooyinka si sahlan loo sameeyo gacmahaaga? Tixgeli hababka samaynta kuleylka laga bilaabo arxyada leh alaabo daboolan. Goobaha diirada saaraya isticmaalka xilliga. Waa inay bixisaa dhammaan hawlaha iyo baahiyaha dalagyada. Sidaa darteed, shuruudaha aasaasiga ah ee naqshadeynta, gaar ahaan, qaabka, qaab dhismeedka waa inuu ahaado:
Ma taqaanaa? Aqalka ugu weyn ee lagu koriyo maanta waa UK. Waxaad ka arki kartaa in ka badan kun nooc oo dhirta kala duwan: iyo kulaylaha (qaxwaha, boodhka muuska, bambo, iwm.), Iyo Bariiska (xayawaanka, canab, iyo kuwo kale oo badan).
Qorraxda hoosteeda oo hoos loo dhigo waxay noqon kartaa oo kaliya wareegga iyo ovalaha, laakiin sidoo kale qaybi, saddex xagal. Sida laga soo xigtay qalabka laga sameeyo si loo sameeyo arc for lagu koriyo, waxay u qaybsan yihiin caag, bir ah, qoryo.
Mid kasta oo ka mid ah xulashooyinka kor ku xusan marka aad dooranaysid nooca iyo waxyaallaha wax soo saarida ayaa leh faa'iidooyin iyo faa'iido daro, kuwaas oo lagaga doodi doono hoos. Xaaladda ugu wayn waa inay ahaato qiimaha iyo macquulnimada codsiga. In soo saaridda aqalka dhirta lagu koriyo waa in ay tixgeliyaan xaqiiqda ah in ay tahay in la duubo. Rugta qoyaanka xad dhaafka ah waxay keeni kartaa horumarinta bakteeriyada waxyeellada leh ee keena cudurrada dhirta. Isla sidaas ayaa lagu dabaqaa aqalka dhirta lagu koriyo. Kuleylka dheeraadka ah waa in laga saaraa.
Waxaa muhiim u ah dadka xirfadleyda ah ee xagaaga si ay u ogaadaan sida loo dhiso aqalka dhirta lagu koriyo oo ay gacmahooda u leeyihiin oo ay doortaan qalabka wax lagu daboolo sariiraha.
In soo saaridda ee-lagu koriyo, waxaa lagula talinayaa in dhererkiisu u siman yahay laba-saddexaad ee width. Miisaanka lagu taliyey ee lagu koriyo (dhererka (N), width (V), dherer (L), cm):
oval ama qaab wareegsan: 60-80 x 120 x 600 iyo ka yar;
safka labaad: ilaa 90 x 220 x 600 iyo ka badan;
Saddexda safaf: ilaa 90 x 440 x 600 iyo ka badan.
Waa muhiim! Dhaqanka saxda ah ee la sameeyay wuxuu u adeegi karaa sanado badan.
Tirada qorraxda waxaa lagu go'aamiyaa dhererka dhirta lagu koriyo. Masaafada u dhaxaysa cirifka waa inay ahaataa 50 sentimitir.
Qalabka wax soo saarka ee shaxanka ayaa xitaa u adeegi karaa laanta cowska caadiga ah. Badanaa isticmaal xayndaabka daaqadaha hore ee alwaaxda ah, tuubooyinka caagga ah, tuubooyinka, sawirka PVC. Wareerka xarkaha, saxanka birta, geeska ama qaansada.
Sida template ah, waxaad isticmaali kartaa silig ama qalab caag ah oo sahlan. Waxa kale oo aad ka soo qaadan kartaa qoraalka dhulka iyo dhulka. Haddii loo isticmaalo sawirka qarxa ee birta ah ee loo isticmaalo godadka, ka dibna dhismaha dharka, dhejinta, xirmooyinka rukunka, xadhkaha, nalka, muraayadaha isku dhafan, weelasha dhejiska ayaa loo baahan doonaa.
Wixii soo saarista ee biraha birta wuxuu sidoo kale u baahan doonaa geesaha, taarikada, nalka, xabadaha, nuts, jannooyinka.
Dhammaan noocyada lagu koriyo waxay u baahan yihiin filim caag ah. Waxay ka ciyaaraysaa kaalinta ugu weyn, waxay ku haysaa kulaylka, qoyaanka iyo microclimate gudaha dhismaha. Waxaad ku jiidi kartaa shaxanka iyo agrofibre. Haddii biraha loo isticmaalo qaab dhismeedka, ka dibna waxaa loo baahan yahay qalab jarida birta. Waxaad u baahan doontaa bangi biibiile ah, gubi ama qalab kale oo kuu ogolaanaya inaad siisid qaabka la rabay.
Qoryaha tuubbooyinka caagga ah: habka ugu fudud
Xulashada wax-soo-saarka ugu fudud iyo kuwa ugu jaban ayaa loo tixgelin karaa habka qorraxda hoosteeda ee lagu koriyo lagu sameeyo caag.
Faa'iidooyinka xulashadani waa sahlanaanta naqshadaynta, xoogga, miisaanka yar. Nidaamka rakibidda iyo kala-soocidda, adkeysiga. Caagadu waa jawi bey'adeed. Dhibaatooyinka waxaa ku jira miisaan yar oo ka mid ah dhismaha. Gustsada adag ee dabayshu waxay jebin kartaa qaybo ka mid ah aqalka dhirta lagu koriyo oo wax u dhimi kara dhirta. Sidoo kale, caaggu wuxuu ka hooseeyaa xoogga farsamooyinka farsamada marka loo eego biraha.
Qaabka waxaa loo sameeyaa sida soo socota. Meelaha la doortay, biinanka ayaa la geliyaa dhulka, taas oo isbarbardhigaya midba midka kale fogaan nus mitirba midba midka kale.
Dhererka qaybta sare ee biinanka - laga bilaabo shan iyo toban ilaa labaatan sintimitir. Length Pin - 50-60 cm, ka dibna labada lammaane ah ee biinanka dharbaaxo dhererka cirifka tubooyinka caagga ah. Biinanka Wooden, fittings iyo tubooyinka PVC ee dhexroor yar ayaa loo isticmaali karaa sida biinanka. Tirada iyo dhererka qashinka PVC ee hoos yimaada waxaa loo xisaabiyaa horey. Waxaad isticmaali kartaa qaab-diyaarin horay loo diyaariyey, ama xisaabi dhererka hal-abuurka ah ee hal-abuurka ah. Tirada qaybaha waa sahlan tahay in la go'aamiyo. Sida la xusay, masaafada u dhexeysa waa in aysan ka badnaan nus mitir.
Si aad u dhisto qaabdhismeedka adag, waxaa lagula talinayaa in la dhigo tuubo goglan oo lagu socdo aqalka dhirta lagu koriyo oo ay ku xiran tahay qaybaha cirifka dhererka.
Si kor loogu qaado awoodda, waxaad isticmaali kartaa baararka iskutallaabta. Sidaa darteed waxaad u baahan doontaa qalab dheeraad ah (iskutallaabin, xarig, dhejin). Si kastaba ha noqotee, quruxda lagu koriyo, halkaas oo qoryaha caaga ah loo isticmaalo sidii taageero, ayaa ah mid sahlan. Haddii aad wali u baahan tahay in aad qaabdhismeedka ka dhigto mid si adag u rakibaya rakibid joogto ah, waxaad isticmaali kartaa dusha sare ee caag ah oo caag ah oo loogu talagalay aqalka dhirta lagu koriyo. Xaaladdan, adigoo isticmaalaya khaanadda saxda ah ee PVC, u isticmaal qalajiyaha dhismaha.
Heat caam ku ah heerkulka 170 ° C. Ka dib marka la qaboojiyo, balaastiggu wuxuu haysan doonaa astaamihiisa asaasiga ah iyo qaabka la helay markii la foorarsaday.
Qeybta hoose, waxaad isticmaali kartaa qoryo. Wixii soo saaris ah ee arcs waa ku filan in la qaato cows ama cows.
Faa'iidooyinka loo isticmaalo qoryaha for arcs iyo saxabadaha waxaa ka mid ah sahlan ee wax soo saarka, saaxiibtinimada deegaanka ee maaddada, xoog ku filan. Waxaan sheegaynaa kharashka yar ee alaabta dabiiciga ah. Dhibaatooyinka waxaa ka mid ah xaqiiqda ah in alwaaxdu ay ku dhacdo burbur degdeg ah oo ku yimaadda jawi qoyan. Intaa waxaa dheer, waxaa la burburiyaa cayayaanka iyo jiirka.
Haddii aad go'aansato in ay daboosho geedo, aqalka dhirta lagu koriyo oo leh qoryo alwaax ah - Tani waa doorasho aad u wanaagsan.. Daaqsiyada iyo cayayaanka dhalinyarada oo si fudud u dhibtoodaan.
Nidaamka ugu fudud, marxaladaha qiiqa ah ayaa si fudud loogu riixi karaa dhulka waxaana filimka / agrofibre ka soo jeeda kor. Dareemaha waxaa lagu xoojiyaa caawinta shixnadaha (dhagaxyada, lebbiska ama qoryaha alwaax).
Waa muhiim! Ka hor inta aanad ku dhejin ulaha alwaax qorraxda, waxay u baahan yihiin in ay qoyaan maalin maalin ah biyaha.
Haddii aad qorsheyneysid inaad sameyso aqalka dhirta lagu rakibo ee cabbirka weyn, waxaad isticmaali kartaa lumber (boards, baararka). Xaaladdan, waxaad dhisi kartaa digsi hooseysa aqalka dhirta lagu koriyo.
Frames waxaa laga sameeyey baararka aan ka yareyn 50 x 50 mm qaybta kala duwan. Qaab dhismeedka qaab-dhismeedka - qaab-dhismeedka ama konik. Barkadaha waxaa lagu dhejiyaa baqshiish, xagasha isku xira iyo taarikada. Maadaama ay xirmooyinka la isticmaali karo iyo dhumucdiisuna tahay 19-25 mm. Masaafada u dhaxaysa cirifka waa isku mid - nus mitir.
Jarooyinka waxaa lagu dhejiyaa qataarada qaybtaas ama boorarka oo leh dhumuc 19-25 mm. Ka hor inta aan la isku darin, waxaa lagu talinayaa in qoryaha lagu daaweeyo antiseptic si looga ilaaliyo cayayaanka iyo qoyaanka.
Dhismaha naqshadani waxay qaadan doontaa waqti dheeraad ah, laakiin baararka qoryaha ayaa siin doona xoog ku filan waxayna socon kartaa ilaa toban sano.
Nooca ugu adkeysan kara waa biraha. Waxay noqon kartaa xadhig (qalab, dhexdhexaad ah 4 mm), xarig 2-6 mm dhuuban, tuubbo, gees ama sheyga oo dhumuc kala duwan.
Faa'iidooyinka maaddadani waa awood, karti u leh adkaynta culeyska culus, nolol maalmeedka dheer iyo sahlanaanta hawlgalka, caabbinta cimilada (dabayl xoog leh, roob xoog leh). Dhismayaasha birta ayaa kuu oggolaanaya inaad sameysid dhismaha cabbir ballaadhan iyo qaabeyn adag. Isla mar ahaantaana si fudud oo isku-xirnaanta iyo rakibida ayaa weli ah.
Dhibaatooyinka waxaa ka mid ah qiimaha waxyaallaha, khalkhalka qaar ee wax soo saarka. Birta waxay ku xiran tahay qashinka. Sameynta biraha birta ah ee lagu koriyo waxay u baahan doontaa wakhti iyo dadaal dheeraad ah.
Markaad abuurto aqalka dhirta lagu koriyo waxaad u baahan doontaa filim xoogan.
Telefoonada ugu yar ee cagaarka lagu dhejiyo waa adag tahay in la sameeyo. Waa ku filan in silig loo gooyo dherer dherer ah oo qeexan qaabkana u xoqo gacanta. Si kastaba ha ahaatee, soosaarka aqalka dhirta lagu koriyo ee laga helo tuubo ama tuubo ayaa u baahan qalab gaar ah. Waxaa laga yaabaa inay ubaahan tahay alxanka. Foorarka kabaha waa in loo sameeyaa si waafaqsan qaab-dhismeedka, iyada oo aan loo eegin nooca biraha aad doorato. Xaqiiqdu waxay tahay in aqalka dhirta lagu koriyo waa inuu ahaadaa isla dhererka dhererka dhan.
Waxay macno u tahay in la isticmaalo dhismayaasha birta haddii aad go'aansato inaad qalab sameysato aqalka dhirta ah oo aad u dheer ama aad u dheer. Xasuusnow in masaafada u dhexaysa arsiyadu waa inay ahaadaan 50 cm.
Qaabku wuxuu ku xiran yahay isticmaalka birta ama alwaaxyada. Ujeedadaas awgeed, xaglaha xagasha, taarikada ama godadka lagu sameeyay gacmaha ayaa loo isticmaalaa.
Dhaqanku wuxuu noqon karaa mid wata welded shaxan, ama wuxuu ka samaysan karaa nalka iyo kabaha si wadajir ah loo sawiraa leh nalka.
Ma taqaanaa? Gogol-dhigga ugu horreeya, oo kudhaca casriga, ayaa la dhisay qarnigii 13aad ee Jarmalka. Waxay ahayd jardiinka qaboobaha kaas oo soo dhaweynta King of Holland Wilhelm ka dhacay.
Si looga fogaado korontada, birta waa la rinjiyeeyn karaa. Rinjiga wuxuu ka kooban yahay lakabka aan la awoodin, taas oo ka ilaalisa birta ka timaadda kiimikada. Dibedda birta waa la dedejiyaa biyaha, sidaas darteed rinjiga ayaa ka wanaagsan inuu doorto qoyaan u adkaysta biraha. Waxaa suurtagal ah in lagu xiro lagu koriyo biro lagu qurxiyo nooc kasta oo ah shey. Sidoo kale waxay siisaa xeelad adag.
Xayawaanka Fiberglass DIY
Xalka wanaagsan wuxuu noqon karaa bedelka biraha ee walxaha isku dhafan. Qalabka fibergoorka ayaa si aad ah u culus miisaanka. Aad ayay u fududahay in leexsho. Waa in la xusuusto oo iska caabbinta korontada.
Waxaa ka mid ah faa'iido darada waxaan sheegi karnaa iska caabida calaamadaha atmospheric. Sidaa daraadeed, dabayl xoog leh ayaa waxyeello u geysan kara ama garaaci kara koronto.
Iskudhafyada waa ay fududahay in la sameeyo. Si arrintan loo sameeyo, waxaad yareysaa qoryaha. Dhererka qaybaha waxaa lagu go'aamiyey dhererka horay loo xisaabiyey ee qaab-dhismeedka. Si loo xoojiyo dariiqyada xakamaynta fibreegga maaha wax la jecelyahay. Aad ayay ufiican tahay inaad sameysid shaybaar ka mid ah kuraasta alwaaxda ama gidaarka. laga bilaabo 25 ilaa 50 cmMeelaha qoyan ee ku yaal bararka saddex meelood sedexaad ee dhumucda bararka. Qodobbadu waxay ku xiran yihiin xariijin, meel ka mid ah dariiqa geli furaha.
Si loo wanaajiyo qallafsanaanta qaabdhismeedka, waa lagama maarmaan in la rakibo xirmo dhererka dhererka. Boorsada PVC leh godadka laga sameeyay dhulka hoostiisa waa kuwo ku haboon.
Isticmaal tuubada beerta dunta ah
Mid ka mid ah xalalka ugu fudud iyo kharashka wax ku oolka ah waa in lagu sameeyo aqalka dhirta ku-meelgaarka ah oo laga soo bilaabo da'da, aan ku habboonayn tuubada biyaha. Si aad u siisid dhismaha dheeraadka ah, waxaad u baahan doontaa geedo la jilicsan oo geedo ah (soodhow waa fiican yahay). Teknoolajiyadda dhismaha waa mid sahlan. Tuubbada u gooyaa dherer dherer ah. Ku dhaji gudaha laanta la diyaariyey. Isku dheji oo ku dheji darfaha daboolka dhulka. Masaafada u dhaxeysa qaybaha - nus mitir. Ka dib markaa, waxaad fidin kartaa filimka oo aad isticmaali kartaa.
Waa in la ogaadaa in naqshadani aysan ku habooneyn aqalka dhirta lagu koriyo. Ugu wanaagsan ee dhan, naqshaddan waa ku habboon yihiin abuur biqilka iyo geedo.
Talooyin iyo tabaha loogu talagalay hagaajinta
Si aad u siiso dhismaha xasilooni dheeraad ah, waxaad awoodi kartaa in prikopat qaabka aqalka dhirta lagu koriyo ee dhulka. Boorashka waxaa sidoo kale lagu hagaajin karaa boodh hore loo sameeyey oo leh ciid. Ku dar muraayado fudud. Dharka dhejiska waa in uu ahaado 10-15% ka dheer dhererka xoojinta iyo gawaarida. Haddii naqshadeynta la dhejiyo nalka / darbiyada, ka dibna dhererka dhejiyaha waxaa lagu go'aamiyaa iyadoo la xisaabinayo rakibidda wasaqda ee madaxa iyo madaxa bolka.
Waxaa jira tiro badan oo ah maaddooyin iyo habab lagu sameynaayo geedo hoostooda, iyadoo ay jiraan waxyaabo kala duwan oo kala duwan.
Waxaad xiiseyn doontaa inaad ogaatid sida loo sameeyo geedo laga dhaliyo dabaylaha daboolka leh.
Si kastaba ha noqotee, ka hor inta aan la bilaabin dhismaha beerta lagama maarmaanka ah iyo dhismaha beerta, ma dhibi doonto marka ugu horeysa ee sida loo qorsheeyo wax walba, xisaabinta kharashka qalabka, iyo laga yaabee inuu raadiyo ku habboon qashinka iyo dusha.
Ha ahaato caajis iyo sawir qorshe qotodheer warqad. Sidaa darteed waxaad ka fekereysaa waxa iyo meesha aad ku noolaan karto. Sida ugu sahlan ee aad u xisaabin kartid kharashyada lagama maarmaanka ah.
https://lezgka.ru so.lezgka.ru © Greenhouse 2019